१७० किलोमिटर लामो, २५ किलोमिटर फराकिलो हिउँको टुक्रा भेटियो ! | Janakhabar
१७० किलोमिटर लामो, २५ किलोमिटर फराकिलो हिउँको टुक्रा भेटियो !
काठमाडौं। १ सय ७० किलोमिटर लामो र २५ किलोमिटर फराकिलो हिउँको टुक्रा भेटिएको छ । यो विश्वकै सबैभन्दा ठूलो हिउँको टुक्रा भएको बताइएको छ । यसलाई वैज्ञानिकहरुले यसलाई ए–७६ नाम दिएका छन् । यो आकारमा निकै विशाल छ । यो आइसबर्ग अन्टार्कटिकामा भेटिएको हो । समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार यो विशाल आइसबर्गको कूल क्षेत्रफल ४ हजार ३२० वर्ग किलोमिटर छ ।
पब्जी बनाउने कम्पनीको आइपिओ जारी हुदै
विच्याट लाइभमा नाक कोट्याउन नपाइने !
डेनमार्कमा ३५ हजार मानिस अट्ने कृत्रिम टापु बनाइँदै !
२०७८ जेष्ठ २२ गते, शनिबार